အားလပ်ရက် – ၁ – (သာကေတ မိချောင်းမွေးမြူရေး စခန်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » အားလပ်ရက် – ၁ – (သာကေတ မိချောင်းမွေးမြူရေး စခန်း)
အားလပ်ရက် – ၁ – (သာကေတ မိချောင်းမွေးမြူရေး စခန်း)
Posted by Mလုလင် on Aug 4, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 60 comments
ဒီရက်ပိုင်း ရွာနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်ပြတ် နေတာလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမရပါဘူး …။
အလုပ် ကလဲ ကုန်ထမ်း ရတာ ဆိုတော့ ပင်ပန်း တယ် …. ည ည ဆို အင်တာနက် မသုံးနိုင်ဘူး … တန်းအိပ်တော့တာ ..။
အားလပ်ရက် တိုင်း Short Trip ထွက်ပြီး တစ်လ ကို တစ် ပိုစ့် တော့ တင်မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အတိုင်း …
အခု လ အတွက် သာကေတ က မိချောင်းမွေးမြူရေး စခန်းကို သွားပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့တာလေးတွေ ပြန် ဝေမျှ ပါ့မယ်။
ဒီရက်ပိုင်း သာကေတ မှာ မိုးက ဆက်တိုက် ဆိုသလို ညနေပိုင်း ဆို တော်တော် ၇ွာဖြစ်တာကိုး ..။
လပြည့်ကျော်ရေထရက် နဲ့ တိုက်နေလေတော့ … မိချောင်း ကန်ပေါ်က သစ်သား တံတား လျှောက်လမ်း နဲ့ မိချောင်းကန် ရေပြင်နဲ့ က တစ်ပေ ခွဲလောက်ပဲ လိုတော့တဲ့ အခြေအနေ မှာ မှ မိချောင်းမွေးမြူရေး ကန် ကိုရောက်သွားခဲ့မိပါတယ်။ ရေးထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ကလဲ ကိုယ့်လုံခြုံမှု ကိုယ့်ဘာသာကို တာဝန်ယူပါတဲ့ …။ လက်ရန်းပေါ် တက်မထိုင်ပါနဲ့ … (ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့—-*င်ယားမှု အာမမခံ) ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ …။
ရွေ့ လျားခြင်း – ၁
ရွေ့ လျားခြင်း – ၂
အစာတခွက် ငါးရာ၊ တစ်ထောင်
အစာတခွက် ကို ငါးရာ တန် နဲ့ တစ်ထောင်တန် ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။
အဲဒါလေးတွေ ကျွေးပြီး မိသားစု တွေ အေးအေးချမ်းချမ်း အပန်းဖြေ ဖို့ နေရာ လေးတစ်ခုပါလို့ ….။
သွားမယ် ဆိုရင်တော့ သာကေတ ရွှေပုစွန် အကျော် (ကျောက်တိုင် ကားမှတ်တိုင် အကျော်) စက်မှုဇုန် ထဲမှာပါ။ စက်မှုဇုန် ထဲရောက်ရင် မေးမြန်း ပြီးသွားလို့ ရပါပြီ။
ကျုပ်ကိုဆိုရင် ကြိုက်လိုက်မယ်ဖြစ်ခြင်းဗျာ… အဲဒီကောင်တွေက…
ရေကျရက် လေးစောင့်ပြီး သွားကြတာ ပေါ့ဗျာ … မနက်ဖြန် ဆို လျှောက်လမ်းနဲ့ ရေပြင် နဲ့ ထိနေနိုင်တယ် တဲ့ …
မိသားစုလိုက် ခုန်ချ လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား
အော်.. အနိစ္စ.. အနိစ္စ
ဒီခန္ဓာတွေ မမြဲပါလား ဟီး…ဟီး နောက်ထှာ
ရှုခင်းပုံတွေ၊ သတင်းဓာတ်ပုံတွေကနေ နည်းနည်းကွဲထွက် သွားတာပေါ့
ဒါနဲ့ မိကျောင်းက သေးသေးတွေဘဲ များတယ်နော်
အကောင်အကြီးတွေ မရှိဘူးလား ပေ ၃၀၊ ၄၀လောက် ဒါဆို အရေခွံလဲ အကြီးကြီးရမှာ
အောက်ဆုံး က ဟပ်ထိုး ပုံထဲက အကောင်ကြီးက .. ၂၅ ပေ ကျော်တယ် …။
သားပေါက်မယ့် အကောင်ကြီးတွေ ရှိတယ်..အဲ့ကောင်တွေ ကန်ကျတော့လျှာက်လမ်းမရှိဘူး .. ကြည့်ချင်သပ ဆိုရင်တော့ သူတို့ ကိုခြံခတ်ထားတဲ့ အုတ်ဘောင် ပေါ်က လမ်းလျှောက်သွားပြီး ကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ … အဲ့ ..ကျန်တာကိုတော့ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း .. . (တာဝန်မယူပါ။) ပေါ့နော့ … အဲ့ အုတ်ဘောင်လေးတွေက ၅ ပေ မပြည့်တပြည့်ပဲ မြင့်တယ်။
ဟိုးတခါ ရေကြီးစဉ် အဲဒီစခန်းက မိချောင်းတွေ လွတ်ကုန်လို့ ဆိုလား…။ သနားဖို့ကောင်းတယ် ထင်တာပဲ၊ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ သတ်ပြီး အရေခွံအဆုတ်ခံရမှာလေ။ ဩော် သဂျီးအမျိုး လူတွေ လူတွေ…
မသေမရှင် မှာ အရေခွံဆုတ် တယ် လို့ကြားဖူးတာပဲ … ဦးကြောင်ကြီးရေ
အမလေး သနားစရာပါလား။ လူတွေများရက်စက်လိုက်ကြတာ။ နောက်တခါ မိချောင်းရေခွံ အိတ်လေးတွေတွေ့ရင်မ၀ယ်တော့ပါဘူးလေ။
ပုံတွေ အားပေးသွားပါတယ် ကိုလုလင်ရေ …
မိကျောင်းအရေခွံ ဆိုလို့ … တဖက်ကလှည့်ပြောရရင် …
အဲ့ကောင်တွေက ပြိတ္တာ အကြီးစား စာရင်းဝင်မလားပဲ …
လျှာ မရှိလို့ အရသာ မသိဘူး ..အဆိုလည်းရှိတယ်လေ. ..
တပိုင်းတစ ပုပ်နေတဲ့ သားကောင် ကို အရည် အရိအရွဲတွေစုပ်ရတာ
လို့လည်း ..ပြောစမှတ် တွင်လေရဲ့ …..
ရွံစရာ မုန်းစရာ သတ္တ၀ါ တကောင်လို့သာ စိတ်ထဲစွဲနေတာမို့
သူ့အရေခွံနဲ့ ထုတ်တဲ့အိတ်လည်း … ရှောင်ဖြစ်တယ်ဗျို့ …
တရုတ်ပြည်မှာတော့ ကြက်သားပေါက်လေးတွေ ကျွေးသဗျ …
ဘယ်ဟာ အမှန်တရားလည်း မသိတော့ဘူးရယ်….
သတ္တ၀ါ ရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဒုက္ခ နဲ့ မကင်းနိုင်ကြတာ မို့ … ပြိတ္တာ အကြီးစား ရှိသလို အသေးစား လေးတွေလဲ ၇ှိပါကြောင်း …..
about မှာရေးတော့ IT အလုပ်တဲ့။ ပို့စ်မှာရေးတော့ ကုန်ထမ်းရတာတဲ့။
ဘာပြောတာလဲမရှင်းဘူး၊ IT တွေထမ်းရတာလား။
IT နဲ့ ရတဲ့ဝင်ငွေ က မလုံလောက် လေတော့ . အပိုဝင်ငွေ လေးရအောင် အားတဲ့အချိန်လေး ကုန်ပြေးပြေးထမ်း ပါတယ်ခင်ဗျ …။
ညနေ ၅ နာရီနောက်ပိုင်း အမြဲအားတယ်။
ကျုပ်တို့ မြို့ရွာတွေက နွားတွေကိုသာ အုပ်လိုက် သူများနိုင်ငံကိုရောင်းစားတာ
ကြက်ဥတို့ ကြက်သားတို့ကြတော့ သူများနိုင်ငံက ဝယ်စားနေကြတယ်ဆို
( အဲ့ဒါက သေခြာသိဘူးဗျ ကြားဘူးနားဝရမ်းချတာ )
သေခြာတာက အသားတွေကို လူတောင်ဝအောင်စားရတာမဟုတ်ဘူး
တရိစ္ဆာန်ရုံထဲက ကျားတွေကိုထားပါတော့ ကျားတွေကို အစားကြွေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနှင့်ပေါ့
အထက်ကချပေးတဲ့ ကျားစာစရိတ်ကို ကျား ( တိရိစ္ဆာန် ) စီမံခံ့ခွဲရေးက ဖြတ်အုပ်မယ်
ကျားစာကြွေးတဲ့ ဝန်ထမ်းကလည်း နှစ်ဆ်ာသားလောက်အိမ်ယူပြန်မယ်
( တစ်ယောက်ယောက်ကို ထိသွားရင်ဆောဒီးဗျာ )
ဘယ်နှယ့်ဗျာ ရတဲ့လခနဲ့ မလောက်လို့မှ
ကျားစာ ခြင်္သေ့စာလေးတွေကို တစ်ဝက်စီခွဲစားနေရပါတယ်ဆို
ခုတော့ ကန်ထရိုက်ပေးလိုက်ပြီဆိုလား …
ကျုပ်ရဲ့ ရူးကြောင်ကြောင် အကျင့် တခုကတော့ 
ကလေးတွေကိုတရိတ္ဆန်ရုံလိုက်ပို့ ရင် မိချောင်းတွေနားသွားထိုင်နေတတ်တာ
တနေ့ တော့ သွားဦးမယ်ကိုလုလင်ရေ
ကလေး တွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ….. လူကြီးက သေချာ ထိန်း မှ ရမယ်ဗျို့  … အဲဒါလေး …။
မိချောင်းစိမ်းကို သဘောကျတယ် …
ဒီကောင် ဘယ်လောက်တောင် အပျင်းကြီးလဲဆိုတာ သိသာနေတယ် …
ဟုတ်တယ် တီတီဝေ ရေ .. ရေညှိတက်လောက်အောင် များ …. နော့ …
မိချောင်း ကန်သွားလည်ပြီး အစာ သွားကျွေးဖို့တော့ စိတ်ကူးရှိတယ်။
လိုက်ပို့ပေးမည့်သူက နောက်ဆုံး တခါ သွားတုန်းက ညစ်ပတ်နေလို့ ချော်လဲမယ် ပြောလို့ တခါမှ မရောက်ဖြစ်ဘူး ကို ဖြစ်နေတယ်။
အစ်မ .. ရေ .. နေသာတဲ့ နေ့ ဆို အဲလောက် မညစ်ပတ်တော့ဘူးဗျို့  …. ရွှံ့ မြေ များတော့ .. လျှောက်လမ်းပေါ် မရောက်ခင်တော့ .. နဲနဲ ချော (ချော်လဲနိုင်) တယ်ဗျ ..။
ဟိဟိ.. လျှောက်လမ်းပေါ် မရောက်ခင် ချော်လဲ နိုင်တာလား.. မသိပါဘူးကွယ်.. စ်ိတ်ထဲမှာ ချော်လဲပြီး ရေထဲ ဒိုင်ပင် ပစ်ရမယ် ထင်နေလို့ မသွားဖြစ်တာ။ ကျေးဇူးပဲနော်။
ပြုတ်ကျလိုက်လို့ကတော့ ဒန် ဒန့် ဒန်နေမှာဘဲနော်
အဲ့ဂလောက် သတ္တိရှိတာ ..
ရွေ့လျားခြင်း – ၁ ဆိုတဲ့ ပုံကို တော်တော်လေး ခိုက်မိပါဂျောင်း ..
ဂတ် .. ဂတ် .. ဂတ် ..
စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ပါးစပ်ထဲ ခုန်ချမယ်ကြံရင် ကင်မရာလေးတော့ ကျွန်တော့ဖို့ ချန်ခဲ့ပါ ဆရာရယ် …
အဲဒါ တစ်ခု ထဲ တော့မရဘူး …. ကျန်တဲ့ ကိစ္စ တွေပါ တာဝန်ယူရမယ် ဒါပဲ .. :-)
ကျန်တဲ့ ကိစ္စ ဆိုတာမှာ …… ကျန်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ ၀ိစ္စ များ အကုန် ပါဝင်ပါသည် …။
မိကျောင်းတွေထဲက ရွေ့လျားခြင်း (၁)ကို
အငဲရဲ့ အကြည့် သီချင်းလေး သတိရသွားတယ်
ဟုတ်တယ် ကိုကမ်းကြီး သူ့ ပုံက .. သတိ ပေးနေသလို ပဲ …..
ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးအားပေးသွားပါတယ် နောက် ပို့စ်မှာပုံလေးတွေတင်ရင် စနိုးတို့အမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့မျောက်ပုံလေးတွေတင်ပေးပါအုံး။ တိရစ္ဆာန်ရုံမှာသွားကြည့်လည်း မျောက်တွေကပျောက်နေတယ် ဘယ်ချောင်မှာသွားအ်ိပ်နေကျလည်းမသိဘူး။။
နေပြည်တော် ပို့ထားတယ် လေ.. ညီမ ရယ် …. :-(
ဂေါ်ရီလာ(မျောက်ဝံ) ပုံကို.. မျက်နှာကပ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံ.. အရမ်းကြိုက်လို့.. အိမ်မှာတောင်ပိုစတာဝယ်ကပ်မယ်စိတ်ကူးဖူးတယ်..
တခါတလေ… တိရိစ္ဆာန်အနီးကပ်ပုံတွေက.. အဓိပ္ပါယ်တမျိုးနဲ့..ရသကိုပေးတယ်ထင်မိတာပဲ..
ရွေ့ လျားခြင်း – ၁နဲ့၂ ဆို.. ပုံကြည့်ရင်း.. ရသတမျိုးရတယ်ထင်တယ်..
ဒီတိုင်းပြည်က လူတွေက ကလေးတွေ ရှိတယ် ဆိုရင် ကလေးချောချောလေး မွေးအောင် ကလေးလှလှ ရုပ်ကလေးတွေ ကပ်တတ်ကြတဲ့ဟာ.. ဘယ်နှဲ့.. မျောက်ဝံပုံကြီးလဲ.. သဂျီး ကြည့်လည်း လုပ်အုန်းနော်.. နောက်မွေးတဲ့ ကလေးက သဂျီးနဲ့ မတူပဲ အဲဒီရုပ်ပေါက်နေအုန်းမယ်။ လူမျက်နှာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်.. ကြောက်ချာကြီး
စိတ်လေတာ သူကြီးရယ် ဒီပုံကြီး အိမ်မှာကပ်ရင် ညရေသောက် ထရင်တောင် သွေးပျက်လောက်တယ်။ ကြည့်လည်း လုပ်ပါအုန်း။
ပုံ ၂ ကို ပိုကြိုက်တယ်။ တကယ့်လူမိုက် အကြည့်ကြီးနဲ့ ။ တချက်လောက်အကြည့်ခံရတာနဲ့ ဖြုံသွားလောက်တယ်။
မြန်မာလိုပြန်ရင် အမြန်ဆုံးဒိုးပေတော့…လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်…
အဲ့ပုံဂျီးသာ အိမ်မှာ ကပ်ထားလို့ဂဒေါ့
သရဲထင်ပြီး လန့်ဖြတ် ဂန့်သွားမှဖြင့် ..
အော် .. ဒုတ်စ ..
ဒို့သဂျီးများ အဲ့ဂလို ပုံဂျီးကို
တိရစ္ဆာန်ဒွေကို ချစ်တတ်ဒါဘာဂလား ..
ဆာဒု .. ဆာဒု ..
မိချောင်းကိုကြည့်နေတုန်း ဒီပုံဂျီး ပေါ်လာသဗျ
ကျေးဇူးတင်တယ်နော် မျောက်ဝံပုံလေးပါကြည့်ခွင့်ရလို့ kai ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။။
“ချစ်ရွှင်သနား. တည်ကြားကြမ်းကြုတ်. ဆက်ဆုပ်ကြောက်ရွံ့. ရဲဝံ့အံ့ဩ. နောအရသာ.”.တဲ့..
ရဿ ၉ပါး ခံစားမှုစည်းစိမ်ဆိုပြီးရှိတယ်.
Home minister ဆီက ပါမစ်မကျတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။
သည်ပုံရီးကို အိမ်မှာ ကပ်ထားမှာတဲ့လား ဟင်…
အပေါ်ဆုံးကပုံက တကယ်အစိမ်းရောင်လားဗျ။ ကျွန်တော်က ရေညှိတွေကပ်နေတာများလားလို့။ ၂၅ ပေ ရှိတဲ့ကောင် ဆိုတော့ တော်တော်ကြီးတာပဲဗျ။ အသက်လဲတော်တော်ရနေပြီထင်တယ်။ ဖမ်းရတဲ့ကောင်တွေလားတော့မသိ။
ကျွန်တော် လဲ ဂဃနဏ သေချာ မသိပါဘူးဗျာ .. အပေါ်က ကောင်ကတော့ ရေညှိတက်လောက် အောင် ပျင်းတဲ့ ကောင်လေ .. နေမကောင်း ဖြစ်နေတာ လဲ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ …….။
ရွှေ.လျားခြင်း2ကသူ.မျက်လုံးကလည်းစကားတွေပြောနေတယ်……
စံပယ်တင် မှဲ့လေး .. ရေ … ရိုက်ထားတာလေး တွေမရှို ကြေးနော် .. တင်ပါဦး .. ပိုစ့် ….
ဒီကောင်တွေက ထုံပေပေ ထင်ရပေမယ့် တိုက်ခိုက်ပြီဆို သွက်လဲသွက်တယ်၊ အားလဲပါတယ်။
သူ့ပါးစပ်က သွားတုံးတုံးကြီးတွေကလဲ ကိုက်ရင်ပြတ်တယ်..။
ိသွားတုံးကြီးတွေက ကိုက်ရင် ချက်ခြင်းမပြတ်ဘူး ။ သူတို့က ကိုက်ပြီးတာနဲ့ သူတို့ ခန္ဒာကိုယ်ကို လှည့်ပါတ်လိုက်ပြီး အသားစကို ဆုတ်ဖြဲတာ ..
အများပြည်သူတွေအတွက်လည်းပိုပြီး safe ဖြစ်တာပေါ့။
ဘယ်မလဲ .. ရန်ပုံငွေ … ကဲ ။
သဘောကောင်းတဲ့ မိချောင်းတွေရောရှိလားဗျ.. တက်စီးကြည့်ချင်လို့..
အမငီး တက်စီးကြည့်လို့ မင်းနန် ကိုယ်တော်လေးလိုဖြစ်သွားမှဖြင့် အနော်တော့ စီးရဲဘူး … ။
ရှင်မွှေးလွန်းဆီ သွားဖို့ guest က အာရုံရနေတယ်။ မစီးပါနဲ့။ သံလွင်တံတား နှစ်ဆင်းတောင် ရှိတယ်။ ကားတွေလဲ ပေါမှပေါနော်……….
ကိုလုရေ မိကျောင်းဆိုတာ တကယ်သစ်တုံးအတိုင်းပဲနော်။ ၀ါးစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံ က သစ်တုံးကြီးနဲ့ တူတယ်။
သဂျီး ကြိုက်တဲ့ ပုံက လည်း အရမ်းလှတာပဲ။ ရွာထဲက အပျိုကြီး တွေ ရင်ခုန်တော့မှာပဲ။
နဲနဲခြောက်ချားဖို့တော့ ကောင်းတယ် .. ဟိုမှာ ဟိုမှာ ဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးလိုက် ပြီးရင် မျက်စိတမှိတ် အတွင်းပျောက်သွားရော …. ရေတောင် မလှုပ်ဘူး … ပြီးရင် .. တံတား အောက်နားလေးက ပြန်ပေါ်လာရော … အရမ်းမြန် ပြီး သေသပ်တယ် …။
ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ဒစ်စကာဗာရီတွေထဲမှာတော့ မိကျောင်းက အမြီးနဲ့ ရိုက်ပြီးမှ တိုက်ခိုက်တတ်တာတဲ့လေ ….. ။ ၀ါးစားမယ်ဆိုတဲ့ ပုံကြီးကို မြင်ရတာ ကြက်သီးထစရာကောင်းလိုက်တာ …. ။ (ခုန်နိုင်မခုန်နိုင်တော့မသိဘူး) မတော်လို့ လှမ်းခုန်ဟပ်လိုက်လျှင် … မတွေးရဲစရာပါပဲ …. ။
အိမ်မြှောင်ကိုသာကိုင်ချင် ကိုင်ရဲမယ် … မိကျောင်းဆိုလျှင် အဝေးကြည့်ရော ၊ အနီးကြည့်ရော … စေ့စေ့ကြည့်ရော ..ဘယ်လိုမှ မကြည့်ရဲဘူး …. ။ ဒါကြောင့်ဘုရားသွားလျှင်တောင် .. တောင်ဘက်မုခ်ကတက်လျှင် … ဘေးဘီဝဲယာမကြည့်ပဲ တက်တာ … အဟီး ။
ခုန်နိုင်တယ်ဗျ .. ခုန်နေတဲ့ ပုံကျွန်တော့မှာရှိတယ် …. ၀ါးနေလို့ မတင်တာ ….။
မိချောင်းမွေးမြူရေးစခန်းဆိုပြီး ရေးထားတာ တွေ့ဖူးတယ်။
သွားကြည့်လို့ရမှန်း သွားကြည့်ရမှန်း မသိခဲ့ဘူး။
ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်တာနဲ့တင် တော်တော်ဖြုံနေပြီ။
လုံခြုံရေးအတွက် စနစ်တကျ မစီစဉ်ထားဘူးလား။
(ကိုယ့်လုံခြုံမှု ကိုယ့်ဘာသာကို တာဝန်ယူပါ) ဆိုတော့ကာ တာ့တာ ပဲ။
စနစ်တကျ .လား မကျလား တော့မသိဘူး .. မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ တီတီ မမ ရေ ..။ သူ့အရပ် နဲ့ သူ့ဇာတ် တော့ ဟုတ်နေတာ ပဲ … အသစ်ထပ်တင် တဲ့ ပုံ ၂ ပုံ မှာ လျှောက်လမ်း အနေအထား ကို ကြည့်လို့ ရမယ် …
အစာကျွေးတဲ့ ပုံ က ပါမစ် တောင်းနေရလို့ ခုမှ တင်လိုက်နိုင်တယ်…။ အနေအထားကို ခန့်မှန်း လို့ ရအောင်လို့ .. ထပ်တင် ပေးလိုက်ပါတယ် …။ ၀င်ကြေး ငါးရာ နဲ့ တန်ပါတယ်။ ရင်တခုန်ခုန် နဲ့ မို့ ကျွန်တော် တော့ ပျော်ပါတယ်။
သစ်သား လျှောက်လမ်းက မိုးတွင်းဆို ချော် နိုင်တာပဲ.. အစာကျွေးပုံကြီးကလည်း စနစ် မကျလိုက်တာ.. အကွာအဝေး အမြင့် အနေအထားက ရေထဲက ခုန် ဟပ် နိုင်တဲ့ အနေအထားကြီး.. လောဘတကြီးနဲ့ ခုန်ဟပ်လိုက်ရင် ကျွေးနေတဲ့ လူ ရဲ့ လက်ကတဆင့် လူပါ ရေထဲ ကျ သွားနိုင်တယ်။
ဗဲဂျီး ဗဲဂျီး ဒိန်းဂျရပ်စ် ပဲ..
စလုပ်တုန်းကတော့ အဲ့လောက် နိမ့်မယ် မထင်ဘူး အစ်မ ရဲ့ .. ကြာတာတော့ နုန်းတက် တာနဲ့ တဖြည်းဖြည်း မြေပြင် မြင့်လာတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။